(95) 2-61552~9,Hot Line:(95) 9-402658777
No.(A-15),Corner of 53rd & 30th Street,Mandalay View on Map
Pool View Premier Suite
Junior Suite Orchids
Family Suite-1 Zakawah
Family Suite-2 Zizawah
Reception,Lobby & Meeting Room
Warmly Welcome Rupar Mandalar Resort
Rupar Mandalar isaromantic hotel in exotic atmosphere.It’s in nature withatouch of culture.We have 44 rooms.A modern facilities and sight full of swimming pool, health and beauty spa. We serve varieties of food such as: Myanmar, Thai, […]
Hotel Facilities Room Facilities Business Centre […]
Thai Food Chinese Food Myanmar Food Western Food
မဟာသင်္ကြန်အခါသမယမှာရွှေမန်းမြို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လမ်းလျောက်သက်ြန်နဲ့ တောသက်ြန်ကိုပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျယ်ဝန်းပြိး အမြဲစိမ်းစိုလှပနေတဲ့ ရူပါမန္တလာဟိုတယ်မှာ လာရောက်တည်းခိုပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ သက်ြန်တွင်းရက်များသာမကပဲ အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ( ၆ )လတိုင်အောင် အခန်းခများကို အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်းကိုအနည်းဆုံးဈေးမြန်မာကျပ်ငွေ ၈၀၀၀၀မှစပြိးရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀၂-၄၀၆၁၅၅၂~၈ / ၀၉-၄၀၂၆၅၈၇၇၇ နှင့် reservation.ruparmandalar@gmail.com သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Firstly , We would like to thank you to all our precious clients for your reviews and thanks to booking.com team for your award.And Secondly , thank you very much and do appreciate to all our staff’s efforts and well […]
Photo shooting by Mr.Masujima Mike Digital Photo Studio from Tokyo Japan
(95) 2-61552~9,Hot Line:(95) 9-402658777·
No.(A-15),Corner of 53rd & 30th Street,Mandalay·
Copyright © 2018 ruparmandalar.com. All Rights Reserved